iOS 9 dia manome antsika fanjifana antsipirihany ny rindranasa | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS 9, iPad
Tamin'ny fahatongavan'i iOS 8, ny mpampiasa iOS dia afaka nanomboka nahita ny fomba fizarana ny vidin'ny bateria amin'ny alàlan'ny fampiharana samihafa napetrakay. Ny fampiasana ny bateria dia olana efa ela tamin'ny finday indrindra indrindra rehefa maty haingana ny baterin'ny fitaovantsika. iOS 8 dia nanolotra anay ny fahitana ny isan-jaton'ny bateria lanin'ny tsirairay fampiharana, tsy hoe be dia be ny fampahalalana fa tsara noho ny tsy misy izany. Saingy amin'ny famoahana ny iOS 9, ny antontan'isa momba ny fanjifana bateria ny fitaovantsika lasa mazava kokoa izy ireo ary ahafahantsika mahita fampahalalana misimisy kokoa.
Miaraka amin'ny maody ambany herinaratra vaovao ao amin'ny iOS 9, Apple dia voatery nanova ny fidirana amin'ny antontan'isa momba ny fanjifana bateria mba hahafahana miditra amin'ny fomba haingana be kokoa. Mba hidirana amin'ny statistikan'ny bateria ananantsika fidirana amin'ny alàlan'ny menio ankapobeny ary mikaroha bateria. Raha vantany vao miditra amin'ity faritra ity isika, dia hitantsika aloha ilay kiheba izay ampiasaintsika rehefa nilatsaka be loatra ny baterintsika ary te hanitatra ny fiainana mandritra ny ora vitsivitsy isika mandra-pahatongantsika any amin'ny charger.
Aorian'ny isan-jaton'ny bateria, izay azo alefa amin'ny alàlan'ny toerana misy anao satria io no fomba tokana hahafantarana amin'ny fomba mivaingana ny habetsaky ny bateria sisa tavela eto amintsika, mahita ny fampiasana bateria izahay. Ity manaraka ity dia mampiseho ny isan-jaton'ny fanjifana bateria ao anatin'ny 24 ora farany na tao anatin'ny fito andro farany. Amin'izany fomba izany no ahitantsika hevitra haingana hoe iza amin'ireo rindrambaiko no nandany bateria bebe kokoa. Rehefa afaka 7 andro lasa izay dia mahita famantaranandro analog. Raha tsindrio io dia haseho izy ireo ny fanjifana nangonina nandritra ny ora maro tao anatin'ny 24 ora farany ary 7 andro farany isaky ny fampiharana. Ny rindranasa tsirairay dia hampiseho ny ora / minitra izay efa teo amin'ny efijery ary koa ny ora / minitra izay tao afara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » iOS 9 dia manome antsika fanjifana amin'ny antsipiriany ireo rindranasa
Raimon montes dia hoy izy:
Ary raha, tsy tiako ho misy mahita ny fampiharana izay ampiasaiko indrindra, azoko atao ve ny mamono ny fampiasana ny bateria amin'ny fomba sasany?
Valiny tamin'i Raimon Montes
Ny fitsapana vaovao dia mampiseho fahaleovan-tena saika mitovy amin'ny iPhone 6s miaraka amin'ny A9 avy amin'ny TSMC sy Samsung
iOS 9 dia tsy mamela ny handika ireo rindranasa ao amin'ny iTunes